User talk:Kantabon - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Kantabon !
၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇
၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈
၄ Barnstar for you!
၆ Person's names suggest
၈ Community Insights Survey
၉ Reminder: Community Insights Survey
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Kantabon ![ပြင်ဆင်ရန်]
ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဦးစွာဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အကောင့်ကို မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ကျူတိုရီရယ် နှင့် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ က သင့်ကို အများကြီး အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တွေက ဝီကီပီးဒီးယားမှာ တည်းဖြတ်နည်းနဲ့ ရေးသားဟန်တွေ၊ အခြား သိသင့်တာတွေကို ပြောပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ပါဝင်ဖို့ သင့်မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာတွေ တတ်ကျွမ်းနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ သတ္တိရှိပါ။ ပြီးတော့ တခြားသူတွေအပေါ်မှာ ရိုးရိုးသားသား ပြုမူဆက်ဆံပါ။ ဒီနေရာဟာ ဝီကီ ဖြစ်ပြီး အလွန့်အလွန် လွယ်ကူပါတယ်။
အကူအညီလိုရင် ဝီကီပီးဒီးယား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဒါမှမဟုတ် Facebook ထဲက မြန်မာဝီကီအဖွဲ့ရဲ့စာမျက်နှာ မှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဝီကီကို ဘယ်လိုစသုံးရမယ် ဆိုတာကိုတော့ တည်းဖြတ်နည်း စာမျက်နှာမှာ ကြည့်ပါ။
တည်းဖြတ်ခြင်းအကြောင်း နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
မေးမြန်းစရာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးဦးကိုလည်း သူတို့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာကနေတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ယူနီကုဒ်ဖောင့် သွင်းဖို့ အခက်အခဲရှိရင် ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
ဘာကီးဘုတ် သုံးရမလဲ မသိရင် ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီစာမျက်နှာကို သုံးပြီး စာမျက်နှာတည်းဖြတ်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးသစ်တစ်ပုဒ် စတင်ရေးသားချင်တယ်ဆိုရင် သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါး စာမျက်နှာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါးသစ်အတွက် အမည်ပေးဖို့ အခက်အခဲရှိနေရင် ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
Help:ပုံတင်နည်းလမ်းညွှန် မှာ ပုံတင်နည်း၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်းတွေ ရှင်းပြထားပါတယ်။
ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ က မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ ဘယ်လိုပုံတွေ တင်သင့် မတင်သင့်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွေမှာ ~~~~ ရိုက်ထည့်ပြီး သင့်အမည်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးပါ။
သင့်အကောင့်အတွက် gadgets (custom features) ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သတ်ပုံကျမ်းမှာ စာလုံးပေါင်း၊ သတ်ပုံသတ်ညွှန်းများ စစ်နိုင်ပါတယ်။
Welcome to Myanmar Wikipedia! I hope you enjoy improving and editing this Wikipedia project. These pages are especially useful for those who are literate in Burmese. However, even experienced Wikipedians who don't know any Burmese have helped out with other things, like 'Interwikis' and updating images from Commons, etc. So don't be afraid to improve the wiki any way you can! Remember, someone else can always come later and fix any changes you make that are not perfect. Thank you.
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၇၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ မကြာမီက သင်ဖန်တီးလိုက်သော စာမျက်နှာThein Sein's Cabinet ဟာ စာမျက်နှာသစ်များအတွက် ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အချို့နဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် (မဖယ်ရှားရသေးပါက) မကြာမီအတွင်း ဖယ်ရှားခြင်း ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ စမ်းသပ်မှုများကို sandbox မှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဆောင်းပါးများ ဖန်တီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သင်၏ ပထမဆုံး ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်ရေးသားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိတ်ဆက် စာမျက်နှာကိုလည်း ဖတ်ရှုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၃၅၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။ Technological University, Mandalay အမည်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာအသစ်ကို သင်ဖန်တီးလိုက်တာကို သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ပါဝင်ရေးသားမှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားဟာ သင်ကဲ့သို့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ကံမကောင်းလှစွာပဲ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) အမည်နဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခု ရှိနှင့်ပြီး တူညီနေတဲ့အတွက် သင့်ဆောင်းပါးကို မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ဤသည်မှာ သင့်အပေါ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ သုံးသပ်ချက်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားစေလိုပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားကို တိုးတက်လာစေဖို့ သင်ဆက်လက် ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာဟာ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါက နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) မှာ ဆက်လက်ရေးသားပြီး ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်အသစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးလိုပါက ဆောင်းပါးရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာ မှာ ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၄၁၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ Ninjastrikers ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက သင်ဟာ ဇော်မြင့်မောင်၊ ဦး မှ အကြောင်းအရာများကို လုံလောက်စွာ ရှင်းပြခြင်း မရှိဘဲ ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ နောင်အခါ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ သင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုများမှာ လုံလောက်တဲ့ တည်းဖြတ်ခြင်း အတိုချုပ်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ရင် အခြားသူတွေအတွက် အကူအညီဖြစ်မှာပါ။ ဒါဟာ မှားယွင်းပြုလုပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးပါပြီ။ စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် sandbox ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် အမှားပြုလုပ်မိတယ်လို့ သင်ယူဆခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာတိုချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၀၀၊ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)
Barnstar for you![ပြင်ဆင်ရန်]
The Working Man's Barnstar
Thanks for contributing in Myanmar Wikipedia. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၉၊ ၇ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
မင်္ဂလာပါဗျ။ ဆောင်းပါးသစ်တွေ အများကြီးရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ မြန်မာစာရိုက်ဖို့ ကီးဘုတ်နဲ့ တိုက်ရိုက် ရိုက်တင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် converter တစ်ခုခုနဲ့ ပြောင်းတင်တာလား သိပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးလိုက်တဲ့ စာတွေထဲမှာ zero-width space လို့ ခေါ်တဲ့ မမြင်ရတဲ့နေရာလွတ်တွေ ပါနေတာ တွေ့ရလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်မှာ အဲဒီ zwsp ပါနေတဲ့အခါ လင့်ခ်ချိတ်တဲ့နေရာမှာ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လဲ တွေ့ရင် လိုက်ရွှေ့ပေးနေပါတယ်။ တကယ်လို့ firefox အတွက် Myanmar Converter plugin လိုမျိုး ထည့်သုံးထားရင် setting ထဲက zwsp ကို ပိတ်ထားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ အခက်အခဲရှိရင်လဲ ပြောပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၄၉၊ ၇ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
​တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကီးဘုတ်နဲ့တိုက်ရိုက် ရိုက်လိုက်မိလို့ဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျ။zwspကိုသတိထားပြီးပိတ်​လိုက်ပါ့မယ်။​ကျေးဇူးပါဗျ။ Kantabon (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၈၊ ၉ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
Person's names suggest[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာလူမျိုး လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နာမည်တွေကို အမည်ပေးတဲ့အခါ နာမည်တူဆိုရင် ကွဲပြားအောင် ရာထူး တစ်ခုခုနဲ့ ကွင်းစကွင်းပိတ်ခံလိုက်ရင် အဆင်ပြေပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်။ နောက်က ပုဒ်ကလေးခံပြီး ဦး၊ ဒေါ် ခံနေရင် interlink ချိတ်တဲ့အခါ အလုပ်များပါတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၃၊ ၁၉ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ Kantabon (ဆွေးနွေး) ၀၁:၀၄၊ ၂၀ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုရေ။ မြန်မာဝီကီအတွက် ဆောင်းပါးသစ်တွေ အများကြီး ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝါကျရှည်တွေ ရေးတဲ့အခါမှာ ဆီလျော်တဲ့နေရာတွေမှာ space လေးတွေ ခြားပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ် အစ်ကိုရေ။ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်တွေ နောက်မှာ (၊ ။)၊ စကားစုတွေ နောက်မှာ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ ရှေ့နောက်မှာ space ခံပြီး ရေးမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရှုတဲ့သူအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၁၆၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
Community Insights Survey[ပြင်ဆင်ရန်]
The Wikimedia Foundation is asking for your feedback inasurvey about your experience with ဝီကီပီးဒီးယား and Wikimedia. The purpose of this survey is to learn how well the Foundation is supporting your work on wiki and how we can change or improve things in the future. The opinions you share will directly affect the current and future work of the Wikimedia Foundation.
RMaung (WMF) ၁၄:၃၃၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Reminder: Community Insights Survey[ပြင်ဆင်ရန်]
RMaung (WMF) ၁၅:၀၉၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Kantabon&oldid=478680" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၅:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။